डलरवादी एनजीओ, आइएनजीओमा संंलग्न रहेका केही आधुनिक सभ्यतामा रमाएकाहरुले देश र संस्कार बिर्सेर भन्न थालेका छन्, बाबु र दाजुभाइले मात्र चेली भनेको ठिक छ, अरुले चेली भन्नु महिलालाई कमजोर बनाउने षडयन्त्र हो । चेली भन्न पाइदैन । चेली भन्नु अपमान हो, चेलीलाई अझै पछि पार्ने पुरुषहरुको षडयन्त्र हो ।
पत्रकारदेखि लेखक, बुद्धिजीवी र समाजशास्त्रीहरु समेत जिल्ल परेका छन्, महिलालाई चेली भन्नु कसरी अपमान हँदो रहेछ ?
यिनै महिलाअधिकारकर्मीहरु हुन्, जो महिलामाथि अन्याय, अत्याचार र कूसंस्कारले थिच्दा तिनको बारेमा आवाज उठाउँदैनन् । तिनै आज महिलालाई चेली भन्नु अपमान हो, यस्तो अपमानवोधक शव्द उच्चारण गर्न पाइन्न भनिरहेका छन् । नेपाली समाजमा, संस्कारमा चेली भन्नु महिलाको आदर, सम्मान र एकप्रकारको पुजनीय भनेको पनि हो । जो पुजनीय छन्, तिनीहरुमाथि अन्याय गर्नु हुन्न भन्ने प्रत्याभूतिको शव्द पनि हो । आधुनिकताको पाठ पढाउनेहरुकै कारण आज पिताले पुत्री, हजुरबाउले नातिनी, माष्टरले विद्यार्थी, गुरुले भक्तिनीमाथि बलात्कार गरिरहेका छन् । चेली शव्दमाथि खेलवाड गर्नेलाई कडा कारवाही गर्ने आवाज उठाउन सकेको भए नेपाली समाज यसरी बिकृति र बिसंगतिको सिकार बन्ने थिएन, महिला जाति खेलौनाका रुपमा रहने थिएनन् । महिलाको सम्मान नै माथि हुनेथियो ।
आमा, चेली, श्रीमती, विधवा प्रतिगामी शव्द भनेपछि त सक्किगो नि, केही आधुनिक महिलाहरु कुन प्रकारको नग्न अग्रगमनतिर लागेछन् । विदेशीसँग विवाह गरेका महिलाका सन्तान बंशज हुनुपर्छ भन्ने यिनै हुन् । महिनावारी हँदा बार्नु पर्दैन भन्ने यिनै हुन् । बार्नु किन पर्ने, किन नपर्ने ? यसबारे वैज्ञानिक व्याख्या यिनीहरुसँग छैन । हो, कुरीति छन्, छाउपडीजस्तो क्रुरता छ, त्यसलाई कसरी समयानुकूल बनाउने भन्नेतिर होइन कि डलर आयो गोठ भत्काउन यिनै पुगे । आज फेरि गोठ ठडिएका छन् र कतिपय छाउ भएकालाई सर्पले टोकेर, निसास्सिएर मरेका छन्, त्यस्तो कडा संस्कारलाई मानवाधिकारयुक्त बनाउनेतिर यिनको सोच नै छैन ।
बस भनिदिए, चेली भन्न पाइदैन । महिलालाई हेप्न पाइदैन ।
महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने, राज्यसञ्जालमा योग्यताअनुसारको पद दिलाउने, देशको नीतिनिर्माणमा पु¥याउने कसरी ? यसको खाका यिनीहरुसँग छैन । महिनावारी हँदा मन्दिर जान पाए महिलाको विकास सम्भव छ ? यही हो महिला अधिकार ? महिला सशक्तिकरण ? चेलीलाई सवल पारौं, चेलीलाई सशक्त हुने शिक्षा दिउँ । यतातिर नसोच्ने ?